Maitiro ekugadzirisa kumhanya kwekutsimbirira bhatani rekutanga | IPhone nhau
Maitiro ekugadzirisa yekumhanyisa yekumhanyisa bhatani rekutanga
Kunyangwe hushoma hwebhatani reKumba pane yedu iPhone, avo vanobva kuCupertino vanoenderera vachisanganisira kuita mamwe mabasa akakosha, kunyangwe nekuuya kwe 3D Kubata, mamwe emabasa ayo, sekuwana mikana yakavhurika, tinogona kuzviita zvakananga kubva pachiratidziri, kuve nechokwadi chekuti bhatani rekutanga hariperi kupfuura zvakajairwa. Ndinoziva huwandu hukuru hwevashandisi kuti mumidziyo yavo yese bhatani repamba rakagara richida kutsiviwa, kwandiri kunyanya zvakangoitika neiyo iPhone 5.
Pamwe anoisa tsvimbo zhinji kana iye haadzori zvakanyanya kumhanya kwaunofanirwa kuchipa kana chanyanya kurova kamwe kunodiwa, sekuwana maapplication akavhurwa pane yedu iPhone kufamba pakati pawo nenzira inokurumidza kupfuura kuenda kubhodhi uye kudzvanya paapp iri mubvunzo.
Neraki, Apple inotibvumidza kuti tichinje kumhanya kwatinotsikirira pabhatani rekutanga, yakanaka kune avo dzimwe nguva vanokurumidza zvakanyanya nekudzvanya. Aya mabasa akagadzirirwa vese avo vashandisi vane imwe mhando yekuremara uye kudzvanya kaviri kana katatu mumutsara hazvigoneke zvachose.
Kune vese avo vanoda kuchinja default default, Apple inovapa mukana kuburikidza nesarudzo dzekuwanika kubva kumamenyu eIOS. Kuti tiite izvi, tinofanirwa kuenderera seinotevera:
Tinokwira kumusoro General
Mukati meGeneral tinoenda Accessibility
Mukati mekuwanika tinotsvaga sarudzo Start bhatani uye tinya.
Sarudzo nhatu dzichaonekwa: Nokusingaperi, inononoka uye inononoka kwazvo. Sezvo isu tichisarudza inononoka uye inononoka kusarudza sarudzo, iyo kumashure kwesarudzo ichatanga kushanduka kuita grey grey inotiratidza iyo nguva iri pakati pemakiyi nema key, kuitira kuti zvive nyore kugadzirisa iPhone yedu kune iyo sarudzo inonyatsoenderana nekukanganisa kwe iro zita rekushandisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 9 » Maitiro ekugadzirisa yekumhanyisa yekumhanyisa bhatani rekutanga
Hapana chinhu chiri nani kupfuura imba chaiyo yecydia nzira yakanakisa yekuchengetedza kusakara uye kubvaruka kwayo
WhatsApp inova yemahara yehupenyu kune vese vashandisi
Chinja nzira yekuratidza huwandu hwezvinhu zvisina kuverengwa